အရပ် ၈ ပေရှည်တဲ့ တစ်ချိန်က နိုင်ငံကျော် “ဇီးကွက်စိန်”အကြောင်း
[Zawgyi] အရပ် ၈ ပေရှည်တဲ့ တစ်ချိန်က နိုင်ငံကျော် “ဇီးကွက်စိန်”အကြောင်း ဇီးကွက်စိန်သည် တစ်ချိန်က မြန်မာနိုင်ငံ၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ပုဂံမြို့ရှိ ထူးထူးခြားခြား အရပ် အရှည်ဆုံး ပုဂံမြို့သူ ဖြစ်သည်။ငယ်ဘဝ – ဇီးကွက်စိန်ကို ၁၃၁၈−ခုနှစ်၊ (၁၉၅၆)ခုနှစ်တွင် ပုဂံမြို့​ဟောင်း​တောင်​ဘက်​ သီရိပစ္စယာရွာတွင်​​ အဖ ဦးထွန်းသိန်း၊ ဒေါ်ငြိမ်းတို့မှ မွေးဖွားသည်။ မွေးချင်း လေးယောက်အနက် အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်ပြီး ကျန်သုံးယောက်မှာ ယောက်ျားလေးများဖြစ်ကြသည်။ ငယ်နာမည်မှာ မခင်စိန် ဖြစ်သည်။ ငယ်​ရွယ်​စဉ်​ကပင်​ သက်​တူရွယ်​တူများကြားတွင်​ ထူးထူးခြားခြား အရပ်​မြင့်​မား​နေသူဖြစ်​သည်​။ ထူးခြားမှု – အမေဖြစ်သူ ဒေါ်ငြိမ်းသည် ဇီးကွက်စိန်အား ကိုယ်ဝန်မရှိခင် ထူးခြားအိပ်မက် မက်ဖူးသည်။ အိမ်ဦးခန်း ခေါင်တိုင်တွင် …
စီးပွားရေးမှာ အင်အားကြီးပြီးဆရာတစ်ဆူ ဖြစ်နေတဲ့ တရုတ်တို့ရဲ့ အတုယူသင့်တဲ့ ဈေးရောင်းနည်း
[Zawgyi] စီးပွားရေးမှာ အင်အားကြီးပြီးဆရာတစ်ဆူ ဖြစ်နေတဲ့ တရုတ်တို့ရဲ့ အတုယူသင့်တဲ့ ဈေးရောင်းနည်း တရုတ်တွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စီးပွား အရှာ အတော်ဆုံးလို့ ဆိုစမှတ်ပြု ကြပါတယ် ။ ကမ္ဘာရဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆို မီးခိုးရှိရင် ခေါက်ဆွဲဆိုင်ရှိတယ် ။ ခေါက်ဆွဲရှိရင် တရုတ် ရှိတယ် ။ တရုတ်လိုရှာ ဗမာလို မဖြုန်းနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားတွေ ကလည်း တရုတ်တွေရဲ့ ရောက်တဲ့ နေရာမှာ စီးပွားရေးကို ရှာကြံ လုပ်တတ်တယ် ဆိုတာကို ထင်ဟပ်နေ ပါတယ် ။တရုတ်တွေရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ဟန်ကို နားလည်ပြီး အောင်မြင်ဖို့ အတွက် ရှေးတရုတ် လူကြီးသူမတွေ ဆုံးမလေ့ ရှိတဲ့ စီးပွားရေးလမ်းညွှန် …
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရှေ့မီးအနိမ့်အား ဘာကြောင့် နေ့/ညအချိန်တိုင်းဖွင့်မောင်း‌စေတာလဲ
[Zawgyi] မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရှေ့မီးအနိမ့်အား ဘာကြောင့် နေ့/ညအချိန်တိုင်းဖွင့်မောင်း‌စေတာလဲ မေးကြတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးဖြေလဲဖြေချင်တယ်သဘောမကျလို့ဆဲကြမှာလည်းစိုးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသဘောကျသည်ဖြစ်စေ သဘောမကျသည်ဖြစ်စေအကျိုးအကြောင်းလေးတော့ နားလည်စေချင်တဲ့သဘောနဲ့ ပြောပြချင်ပါတယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရှေ့မီးအနိမ့်အား ဘာကြောင့် နေ့/ညအချိန်တိုင်းဖွင့်မောင်း‌စေတာလဲဆိုရင်.။ ဆိုင်ကယ်မောင်းလာတာကို တစ်ခါတရံ မမြင်ရတာမျိုးဖြစ်တက်ပါတယ်ဆိုင် ကယ်ကဘောင်ကျဉ်းတော့ မထင် မှတ်တဲ့အခါမျိုးမှာ မမြင်လိုက်ရတာမျိုးပါမီးဖွင့်မောင်းလာရင် အဝေးကလာနေတာမျိုးလဲမြင်ရတယ် မီးဖွင့်မောင်းလာတာမို့ ဆိုင်ကယ်ကိုမမြင်နိုင်သည့်တိုင်အောင် မီးရောင်ကိုတော့မြင်နိုင်ပါတယ် ကားမောင်းတဲ့သူတွေ အထူးသဖြင့် ကုန်ကားလိုမျိုး ကားကြီးမောင်းသူတွေအတွက်ကားရဲ့ဘက်မှန်ကနေ မမြင်ရတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေမျက်ကွယ်အနေအထားရောက်နေတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေဟာမီးဖွင့်မောင်းလာခဲ့ရင်တော့ မီးရောင်ကိုဘက်မှန်ကနေမြင်နိုင်ပြီးယာဉ်အန္တရာယ်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးနိုင်လို့ပါ။ အခုလိုရှင်းပြသည့်မီးဖွင့်မောင်းစေသည့်အကြောင်းကိုfri များအနေဖြင့် လက်ခံသူရှိသလို သဘောမကျသူတွေလဲရှိပါလိမ့်မယ်ဘက်ထရီလိုမျိုး ပြသနာတက်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေလဲရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လဲ သိရှိနားလည်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဆိုဆို ငါတို့ကိုသိစေချင်လို့ပြောပြတာပါလားလို့‌တော့တွေးပေးကြပါ fri များခင်ဗျာ။ ဒုရဲအုပ်ဌေးလွင်(ခ)နေမျိုးသူရ [Unicode] မျောတျောဆိုငျကယျရှမေီ့းအနိမျ့အား ဘာကွောငျ့ နေ့/ညအခြိနျတိုငျးဖှငျ့မောငျး‌စတောလဲ မေးကွတဲ့သူတှကေလညျးအမြားကွီးဖွလေဲဖွခေငျြတယျသဘောမကလြို့ဆဲကွမှာလညျးစိုးတယျဒါပမေဲ့လညျးသဘောကသြညျဖွဈစေ သဘောမကသြညျဖွဈစအေကြိုးအကွောငျးလေးတော့ နားလညျစခေငျြတဲ့သဘောနဲ့ ပွောပွခငျြပါတယျမျောတျောဆိုငျကယျရှမေီ့းအနိမျ့အား ဘာကွောငျ့ နေ့/ညအခြိနျတိုငျးဖှငျ့မောငျး‌စတောလဲဆိုရငျ.။ ဆိုငျကယျမောငျးလာတာကို …
အင်တာနက်သုံး ဖုန်းကြည့်တာများလို့ မျက်ရိုးကိုက်တတ်သူများနဲ့ မျက်မှန်သမားများအတွက် ဆေးနည်း
[Zawgyi] အင်တာနက်သုံး ဖုန်းကြည့်တာများလို့ မျက်ရိုးကိုက်တတ်သူများနဲ့ မျက်မှန်သမားများအတွက် ဆေးနည်း မျက်မှန်လွတ်စေတဲ့မျက်ကြည်စားဆေး မှုန်ဝါးဝါးမို့ ဆရာဝန်ပြကြည့်တော့ အနီးကြည့်ပါဝါ (+၁၅၀)ဒီဂရီ မျက်မှန်တပ်ခဲ့ရသည်။အခုအသက်(၄၀)ကျော်မှ မျက်မှန်လွတ်လေတော့ထူးဆန်းနေသလို အများကထင်ကြတော့သည်။ ဆေးနည်းအချိုးအစားအတိုင်း လွယ်ကူစွာဖေါ်စပ်ရန်ဖြစ်လေသည်။ ဆေးနည်း (၁) ဆီးဖြူးသီးကို ထုထောင်းပြီးအစေ့ ဖယ်နေလှန်းအမှုန့်ပြုလုပ်ရန်။ (၂) ကြိတ်မှန်ရွက်ကိုခူးအရိပ်မှာအလိုအလျောက်သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံအမှုန့်ပြုရန်။ (၃) ကွမ်းရွက်ကို အခြောက်လှန်းအမှုန့်ပြုရန်။ ထို(၄)မျိုးသာလိုပါသည်။ယခုခေတ်ကာလ မျက်မှန်ကောင်းတစ်လက်လုပ်ပါမူ ကာလတန်ဖိုးလေးသောင်းငါးသောင်း မက ကုန်သည်သာ။နေရာတကာ မျက်မှန်မပါတော့ စိတ်ပျက်ဖွယ် အကန်းကြီးလိုဖြစ်ပြန်သည်။မျက်မှန်မေ့ကျန်ပါလျှင် ဘာမှမမြင်ရချင်တော့၊ စာဖတ်ဖို့၊ ဖုံးပွတ်ဖို့ အကုန်ခက်ချေသည်။မျက်မှန်ပါဝါကအကျမရှိအတက်သာ ။ထိုမျှမက ပါဝါမကိုက်ပါလျှင် ဇက် ကြောကတက်စိတ်ကပျက်ဖြစ်ရပြန်သည်။ သုံးဆောင်ရန် ညအိပ်ပြီဆိုပါလျှင် ဆီးဖြူသီးမှုန့်လက်ဖက် စားဇွန်း(၁)ဇွန်း ကြိတ်မှန်ရွက်မှုန့် လက်ဖက်စားဇွန်း(၁)ဇွန်းကွမ်းရွက်ခြောက်မှုန့်လက်ဖက်စားဇွန်း(၁)ဇွန်း၊ထိုဆေးသုံးပါးအား ပျားရည်လက်ဖက်စားဇွန်း(၃)ဇွန်းနှင့်ရောမွေ၍စား …
လူတွေအမြင်မှာ အရမ်းချစ်ခဲ့ကြရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ပြတ်စဲမှုတွေဖြစ်လာရတာလဲ
[Zawgyi] လူတွေအမြင်မှာ အရမ်းချစ်ခဲ့ကြရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ပြတ်စဲမှုတွေဖြစ်လာရတာလဲ ကိုယ်တွေ သဘောကျရတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲတွေ ကွဲကွာနေကြတာ မြင်တော့ ဘာလို့လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေက အတောမသတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့နှစ်ဦး နှစ်ဖက်လုံး အဆင်မပြေကြတော့လို့ပေါ့။ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက်ချစ်ပြီးအစစအရာရာနားလည်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားခဲ့ပေမယ့် အဖုထစ်တွေ ၊ ပြဿနာတွေများလာတဲ့အခါ … ညှိယူလို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခါ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ကြတာပါပဲ။ဒါဆို ဘာလို့ လက်ထပ်ကြသေးလဲလို့ မေးခွန်းတွေ ထွက်လာဦးမှာပါ။ ဘယ်သူမှလည်း မကွဲချင်ပါဘူး။ အနာဂတ်မှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှလည်း မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အစပိုင်းမှာတော့သူနဲ့ပဲ သက်ဆုံးတိုင် ပေါင်းသင်းသွားမယ်လို့ ကိုယ်စီတွေးထားကြမှာပါ။ချစ်သူသက်တမ်း ကြာလာတာနဲ့အမျှ သူ့အကြောင်း ၊ ကိုယ့်အကြောင်းတွေ သိလောက်ပြီလို့ထင်ထားခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်း အတူတူနေ ပေါင်းသင်းနေထိုင်တော့မှ အကြောင်းသိရတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။အခုခေတ်မှာ ကွာရှင်းကြတာမျိုးက …
သရဏဂုံ သုံးပါးကို အမြဲမပျက်ရွတ် ဆိုပွားများသော ပုဂ္ဂိုလ် ရရှိနိုင်သော အကျိုးတရားများ . . .
[Zawgyi] သရဏဂုံ သုံးပါးကို အမြဲမပျက်ရွတ် ဆိုပွားများသော ပုဂ္ဂိုလ် ရရှိနိုင်သော အကျိုးတရားများ . . . မိမိ ၏ အဆွေ ခင်ပွန်း များကို မည်သူကမျှ ပျက်စီးအောင်မပြုလုပ်နိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးတရားတို့ဖြင့် ပြည့်စုံနိုင်ပါသည်။ထို့ကြောင့် … အလွန်အလုပ်များ၍ တရားအားထုတ်ရန်အတွက် အချိန်မရသောသူများသည်သရဏဂုံသုံးပါးကို အမြဲမပြတ် ရွတ် ဆိုပွားများသင့်ပါသည်။သရဏဂုံ သုံးပါးကို အမြဲမပျက်ရွတ်ဆိုပွားများသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် အောက်ပါ အကျိုးတရားများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၁။ ဒိ သာသု ပူဇိတော ဟောမိ။ သွားလေရာ အရပ်တိုင်း၌လေးစားမြတ်နိုးခြင်းခံရမည်။ ၂ ။ တိက္ခပညော။ ဉာဏ်အလွန်ထက်မြက်မည်။ ၃။ သဗ္ဗေ ဒေဝါနုဝတ္တန္တိ။ နတ်တို့၏ စောင့်ရှောက်ခြင်းခံရမည်။ ၄။ …
အသားမစားဘဲ ရက်အနည်းငယ်လောက် ရှောင်လိုက်တဲ့အခါ ရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ
[Zawgyi] အသားမစားဘဲ ရက်အနည်းငယ်လောက် ရှောင်လိုက်တဲ့အခါ ရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ အသားစားတာက ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အသားဓာတ်နဲ့ဗီတာမင်တွေရနိုင်တဲ့အပြင် အရသာလည်းကောင်းတာကြောင့် အသားမကြိုက်တဲ့သူ နည်းပါတယ်။အသားစားတာက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းတဲ့အချက်လည်းရှိသလို၊ ဆိုးတဲ့အချက်လည်းရှိပြီး သူများအသက်သေပြီးမှရတဲ့ အစားအစာမို့ တချို့တွေကလည်း သားသတ်လွတ်စားကြပါတယ်။သင့်အနေနဲ့ ရက်အနည်းငယ်လောက် အသားမစားဘဲ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုပဲ မျှတအောင် စားတဲ့အခါ ဒီကောင်းကျိုးတွေကို ရပါလိမ့်မယ်။ (၁) ဝိတ်ကျသွားမယ် အသားစားခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေတာကြောင့် ကလေးတွေကိုများများကျွေးသင့်ပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့လူကြီးတွေကတော့ အသားကိုအနည်းငယ်ပဲစားသင့်ပါတယ်။ပုံမှန်အသားများများစားတတ်တဲ့သူက အသားမစားဘဲရှောင်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဝိတ်ကျချင်သူတွေက အသားမစားဘဲ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပဲစားသင့်တယ်လို့ အကြံပြုကြတာပါ။ (၂) အသားအရေကြည်လင်လာမယ် အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းထဲက အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကိုချေဖျက်ပေးတာကြောင့် ဝက်ခြံနဲ့အဆီပြန်တာတွေကိုသက်သာစေပြီး အသားအရေကိုကြည်လင်လာစေပါတယ်။ (၃) နဂိုကထက်ပိုပြီးလန်းဆန်းပေါ့ပါးလာမယ် …
This Month : 11060
This Year : 251989
Total Users : 547122
Total views : 2430078